बाढीले भत्काएको सडक नबन्दा स्थानीयलाई कठिन
रौतहट (अस) । रौतहटका विभिन्न स्थानमा रहेको सडक मर्मत नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । गत असार २७ र २८ गतेको बाढीले सडक तथा डाइभर्सनलाई क्षति पुर्‍याएपछि पुनर्निर्माणमा चासो नदिँदा स्थानीय समस्यामा परेका हुन् ।
राजदेवी नगरपालिकाअन्तर्गत पथरा नजिकको निर्माणाधीन पुलको डाइभर्सन बाढीले बगाएको थियो । डाइभर्सन बगाएको डेढ महीना भइसक्दासमेत पुनर्निर्माण नहुँदा गौर पुग्नका लागि सो भेगका बासिन्दा अन्य सडक प्रयोग गरी करीब ७ किलोमिटर थप यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । सो डाइभर्सन बनाउनेतर्पm अहिलेसम्म कुनै निकायले चासो नदिएको स्थानीय वासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
यस्तै गौर गंगापिपरा समनपुर (रजैया) सडकअन्तर्गत पर्ने पथरा पुलको डाइभर्सन पनि अझै बनेको छैन । सोही कारण अधिकांश वासिन्दा वैकल्पिक सडक मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका ५ ओटा वडा, माधवनारायण नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा र गढीमाई नगरपालिकाका धरमपुर, समनपुर, विनग्रा लगायत ठाउँका सडक पनि बाढीले भत्काएको छ ।
बाढीले बगाएको डाइभर्सन तत्काल मर्मत गरी यातायात सुचारु गराउन सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रपुरलाई पटक–पटक भनिए पनि अहिलेसम्म चासो नदिएको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । उतm सडक तत्काल मर्मत गरी यातायात सुचारु गराउन राजदेवी नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय, चन्द्रपुरका प्रमुख दरोगा साहले आपतकालीन कामका लागि कार्यालयसँग बजेट नभएको हुँदा स्थानीय तहबाटै मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहबाट ५० प्रतिशत बेहोरिएमा डिभिजन कार्यालयबाट ५० प्रतिशत लगानी गरी तत्काल डाइभर्सन बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह
गुजरा नगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । औरही–खतवैया सडक खण्ड कालोपत्रे हुने भएपछि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना एक हप्ताभित्र हटाउन गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी कार्यक्रमअन्तर्गत कुल रू. ८ करोडको लागतमा सडक कालोपत्रे हुन लागेको हो । सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का रमन, सगरमाथा र सगुन निर्माण सेवाले संयुुक्त रूपमा पाएको इन्जिनीयर उतिमलाल दासले बताए । निर्माण कम्पनीले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने उनले जानकारी दिए । उक्त सडक निर्माण भएमा सो क्षेत्रका खतवैया, लक्ष्मीपुर, डुमरिया, पल्टुवा लगायत गाउँका वासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
रौतहटमा साताको ३ दिन बैंक खुल्ने[२०७६ चैत, २२]
दूध बोक्ने गाडी नचल्दा दुग्ध कृषक मर्कामा[२०७६ चैत, २२]
जनकपुरमा सबै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ [२०७६ चैत, २१]
कोरोना रोकथाममा सक्रिय बन्दै प्रदेश २ सरकार[२०७६ चैत, २१]
दूध बोक्ने गाडी चल्न नपाएपछि पशुपालक किसान मर्कामा[२०७६ चैत, २१]
भैरहवा भन्सारद्वारा २९ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ५०० डलर सटही सुविधा